ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး စိတ်ဝင်စားသူများ ဖတ်ရှုကြည့်သင့်သည့် မောင်မျက်မှန်၏ “ယနေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမြင်ကွင်း”
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး စိတ်ဝင်စားသူများ ဖတ်ရှုကြည့်သင့်သည့် မောင်မျက်မှန်၏ “ယနေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမြင်ကွင်း”
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 3:38 AM
တော်တော်ကေါင်းတဲ့ ဆောင်းပါးဘဲ။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့မူရင်းသရုပ်မှန်ကို ဖေါ်ပြထားတာဘဲ။ပြည်သူတိုင်းဖတ်သင့်ပါတယ်။စာအုပ်အနေနဲ့ထုပ်ဝေဖြန့်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်။ ဂျာနယ်တစောင်ထဲမှာထဲ့နိုင်ရင်လဲကေါင်းတာဘဲ။
All are absolutely right
Quiteagood article!
Michael McCauburn said...
အလွန် အင် မတန် ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို မျိုး လူတွေကို မျက်စိဖွင့်ပေးမယ့် ဆောင်းပါးရှင် မျိုး များများပေါ်လာပါစေ။
လေးစားပါတယ် မောင်မျက်မှန်ရေ ၊ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေ ကိုအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်အောင် အနီးစပ်ဆုံး ပုံဖေါ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးပါ။ ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေမှာပုံနှိပ်ဖေါ်ပြစေချင်ပါတယ်။ ဒါမှလူအများလဲမျက်စိပွင့်ကြမယ်။ ဒေါ်စုကလဲ အိန္ဒိယမှာ လုပ်တဲ့ အင်တာဗျူးမှာ လက်ရှိ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ကိုမပြင်ရင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ တရားမျှတမှု့ မရှိနိုင်ဘူးလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ပြောလာပါပြီ။ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရ နဲ့ တပ်မတော် မပါပဲနဲ့ အခြေခံဥပဒေကိုဘယ်လိုမှပြင်လို့မရပါဘူး။ သူတို့ ကတိုင်းပြည်အပေါ်မှာဘယ်လောက်ရိုးသားတယ်ဆိုတာလူတွေအားလုံးကို ပြသဖို့ ၂နှစ်ကျော် လောက်ပဲ အခွင့်အရေး ရှိပါတယ်။
အဲမတန် မှန်လိုက်လေ ဆရာမောင်မျက်မှန် ခင်ဗျ။ မျက်စိလည်နေတဲ့ ပြည်သူအများကိုဖြင့် ဒီလိုရှင်းပြမှပဲရမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ သမိုင်းကို လွဲလွဲမေ့ထားတတ်တဲ့ အကျင့်ကအရိုးဆွဲနေကျပါပြီ။ မိမိအတွက် နေသင့်လို အစဉ်ပြေနေရင်ဖြစ် ယုံကြည်ချက်ကိုလဲ ဘေးချိတ်ထားတတ်ကျတာလဲဆိုတာပဲ။ အခုခေတ်လူများက ပိုတောင်ဆိုးပါသေးတယ် နိုင်ငံရေးကို ဘာဆိုဘာမှ နားမလဲကျဘူး။ နိုင်ငံရေး ဗဟုသူတမရှိတာကို အပြစ်သွားပြောလို့က မရပြန်ဘူး တနေ့စားဖို့ တနေ့ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရတော့ ကိုအဖိနိုပ်ခံနေရတာကိုလဲ အချိန်ပေးလို့ မတွေးမိနိုင်ကျတာဆိုးတာ။ ကိုအဖိနိပ်ခံနေရတာကိုသိတယ် ဘယ်လိုတွေ ဖိနိပ်လို့ ကို့အခွင့်ရေးဆုံးရုံးနေကျသလဲဆိုတာ ကိုမသိဘူးပေါ့ဗျာ။ အိုဘားမားဗမာပြည်လာတယ်လို့ပြောတော့ ရပ်ကွက်ထဲက ကြီးကြီးငယ်ငယ် ကလေးအဆုံး ပျော်နေကျတယ်။ အိုဘားမားလာတာ ဘာကြောင့်ပျော်တာလဲ သူတို့မသိဘူး ပျော်တော့ ပျော်နေတာပဲ။ အိုဘားမားကြီးက ဘာတွေလုပ်ပေးမှာမလို့ ပျော်နေတာလဲလို့ သွားမေး သူတို့လဲမသိဘူး။ ပျော်တော့ ပျော်နေတာပဲ ဒီလိုပျော်တယ်ဆိုတာကလဲ သူ့တို့ရဲ့ မသိစိတ် အဖိနိပ်အချိုးဖောက်ခံထားရတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဖွင့်မပြောတတ်တဲ့ မသိစိတ်တွေက ကို့ရဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအတွက် အိုဘားမားကြီးက အလင်းရောင်တခုများဖြစ်လေမလားလို့ အလိုလိုသိနေကျသလားလဲမပြောတတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။
The best article of the year which reveal the inner mind of the Thein Sein's government. It also reflects the overall political situation and spotlight the play ground where most of the so called democratic activists lost their destiny and heading nowhere without conceiving awareness of they are strung and manipulated by the masqueraded dictatorship of persisting military government.
ဒီလို မျိုး လူတွေကို မျက်စိဖွင့်ပေးမယ့် ဆောင်းပါးရှင် မျိုး များများပေါ်လာပါစေ။ ကျေးဇူးတင်လျှက်
THANK to Dr lwan shwe for expressing likeavalueable article.